Le yimodeli entsha nenomtsalane yeTesla Model Y | Iindaba zeGajethi
Kwaye emva kweeveki ezimbalwa apho uElon Musk ngokwakhe wongeza ukuthandabuza kunye nokuhlekisa ekunikezelweni kwale Tesla Model Y kunye nomanyano lwama-initials kuzo zonke iimoto zakhe -S3XY, Model S, Model 3, Model X kunye Model Y- sele sinayo Imodeli Y entsha esandula ukukhutshwa.
Le yimoto eya kuyibeka ngandlela thile ubhuti omdala weTesla Model 3 Kwaye emva kweminyaka emininzi sithetha ngale moto intsha, izolo iye yaba semthethweni. Into embi kukuba zonke iimoto eziboniswe kwiTesla lixesha lokuhanjiswa kwazo, kule meko ayihlukanga kwezinye iimodeli kwaye iya kufumaneka ukusuka kunyaka olandelayo we-2020, kodwa hayi ekuqaleni, Hayi, ekupheleni konyaka okanye nasekuqaleni konyaka wama-2021 e-US.
1 I-480 km yokuzimela kunye nezihlalo ezisi-7 zale Tesla SUV intsha
2 Uyilo kunye nokusebenza kweModeli Y
3 Ixabiso leTesla Y
I-480 km yokuzimela kunye nezihlalo ezisi-7 zale Tesla SUV intsha
Le yileta yokugubungela le Modeli Y. Nge Uluhlu lweekhilomitha ezingama-480 kunye nezihlalo ezisi-7 Singatsho ukuba le yeyona SUV yombane inomdla ngandlela zonke. Abo bebekho xa bekusungulwa imoto ngentsasa edlulileyo khange badane kwaye oku kufana nazo zonke iimoto zakwaTesla, imoto entle. Inyani yile yokuba u-Elon Musk une charisma kwaye uyazi ukuba angazivelisa njani iimveliso zakhe kakuhle, kodwa ngaphezulu kwayo yonke into ayaziyo yindlela yokugcina imfihlo yoyilo lwale moto intsha yohlobo.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba uMusk ngokwakhe ukuqinisekisile oko Imodeli 3 kunye neModeli Y entsha yabelana ngama-75% ezinto ke sijamelene nohlobo olukhulu ngandlela zonke kodwa ngomgca woyilo kunye nezixhobo ezilinganayo nemodeli yangaphambili, eyenza ukuba ixabiso lale moto liphantsi kancinci kunoko kulindelweyo. Ngaphakathi kule moto kuyafana (kunendawo ethe kratya) kunaleyo sinayo kwiModeli 3, ngale ndlela sinokubona ukuba uphahla lweglasi lunika njani imvakalelo yokuphakama, indawo yokubonela inendawo enkulu okanye idashboard ngesikrini esikhulu seHuge sibonakala sihle.
Uyilo kunye nokusebenza kweModeli Y
Kubonwe ngaphandle, leTesla Model Y intsha ibonakala ngathi iyimoto enemigca efana ncam neModeli 3, ngokucacileyo kuyakufuneka ukuyibona ngokobuqu okanye nkqu ecaleni, kodwa ngokubanzi iyafana. Oku akuthethi ukuba ayisiyiyo "intamo eyaphukileyo" imoto yoyilo., ewe, luhlobo olwenza ukuba ujije intamo yakho ukuya kwelona liphezulu ukuyilandela xa ibaleka. Ukongeza, imibala enayo efanayo neenguqulelo ezithile iyenza ibonakale. Ngamafutshane, uyilo luyamangalisa.
Ukuba sigxila kwizibonelelo zalo Mzekelo Y, siyaqonda ukuba ubumbeko esinalo iyafumaneka kwiwebhusayithi yeTesla Iyafana kanye njengoko sinayo kwiModeli 3. Imodeli enezona zigqibeleleyo ziya kuba malunga neekhilomitha ezingama-450 zokuzimela kunye nesantya esiphezulu se-250 km / h Enkosi kwiimoto zayo ezimbini. Kwimodeli esisiseko, ukuzimela okubonelelwa nguTesla kuncitshisiwe kwaba yi-370 km kwaye isantya sayo siphezulu siya kufikelela kungathathelwa ingqalelo i-200 km / h. Onke la manani anikezelwa ngumenzi, kodwa njengoko sele uyazi, konke oku kuya kuxhomekeka kwizinto ezininzi zangaphandle ezinje ngeqondo lobushushu, nokuba sihamba esixekweni, kuhola wendlela okanye kuhola wendlela, isantya, njl.
Ixabiso leTesla Y
Ngaphandle kwamathandabuzo sifikelele kwindawo ephambili yale ntetho kunye neModeli Y entsha.Inyani kukuba i-Tesla ayizizo izithuthi esinokuthi "zifikeleleke" kubo bonke abasebenzisi kwaye siyazi ukuba iinkonzo ezinikezelwa nguTesla kunye ne-supercharger zayo, iziqinisekiso okanye inkonzo yasemva kokuthengisa ngaphandle kokuthathela ingqalelo umgangatho wesoftware kunye nezixhobo, yenza ixabiso lenyuke kuzo zonke iimodeli zalo. Inkampani esekwe eCarlifonia yenza umsebenzi olunge kakhulu kule minyaka idlulileyo kwaye kuyinyani oko Imodeli 3 kunye nale Model Y inamaxabiso afikeleleke ngakumbi kuneModeli S okanye iModeli X.
Ixabiso lokwazisa ngolona hlobo lulula lwale Model Y izakuqala kwi- $ 39.000Ngelixa zonke izinto ezongeziweyo umsebenzisi anokucinga ukuba azifaka kwimoto entsha ziya kwenza ixabiso lokufikelela kwi-60.000 yeedola. La maxabiso ngokuqinisekileyo aya kuphelela ekubeni aphakamileyo kuyo yonke iYurophu ukuba sibala irhafu kunye nabanye. Ngamafutshane, namhlanje i-40.000 i-euro ayiloxabiso elinokufikeleleka kuninzi lwethu kodwa abo bafuna ukuthenga iTesla sele besazi ukuba le nto inikwa lolu hlobo ayizukufunyanwa kwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imiboniso » Le yimodeli entsha nenomtsalane yeTesla Model Y
Eyona micimbi mihle kwiKoogeek kunye neemveliso zedodocool kwiAmazon